Vota XL wuxuu kuceliyaa isku xiraha MagSafe-ka MacBook Pro | Waxaan ka socdaa mac
Volta XL, ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu soo celin karo MagSafe-ka loo yaqaan 'MacBook Pro'
Inbadan waxay ahaayeen soosaarayaasha qalabka Apple MacBook kuwaas oo hindisay ikhtiyaarro qaab ama qaab kale ugu laaban kara moodooyinka cusub suurtogalnimada haysashada shaqeynta iskuxiraha MagSafe-khuraafaadka markale.
Maqaalkan waxaan ku tusineynaa ikhtiyaar cusub oo aad hadda ka heli karto khadka tooska ah oo qiimo dhimis aad u qurux badan leh. Tani waa Volta XL, fiilooyin leh cajalad USB-C magnet ah oo ka soocaya jirka xarigga leh jiido yar.
Qoritaanka maqaalkan, labada ama seddex jeer ee uu MacBookkeyga ku sigtay inuu dhulka ku dhufto ayaa maskaxda ku haysa sababtoo ah jiido fiilada USB-C oo si adag ugu xiran jirka MacBookga dekedda kaliya ee ay leedahay. Waqtigan xaadirka ah, moodooyinka cusub ee Apple ee 'Apple MacBook' iyo 'MacBook Pro' waxay leeyihiin oo keliya dekedo USB-C ah midkoodna ma haysto wax u eg isku xiraha MagSafe.
Volta XL waa fiilo cusub oo xawli ku socota oo USB-C ah oo ay ku jiraan isku xira magnet-ka oo aad u badan sida isku xiraha MagSafe ee Apple ay ka soo saartay MacBooks-keeda markii loo wareejiyay USB-C awood ahaan.
Sida aad ka arki karto sawirada, isku xiraha birlabku wuxuu sameeyaa isku xirida iyo goynta MacBookgaaga ama MacBook Pro neecaw inta aad si aamin ah uguxirantahay isticmaalka. Xitaa iyada oo isku xira magnetic, weli way bixin kartaa ilaa 87W, iyada oo siineysa ku filan oo ay ku soo dallacdo MacBook Pro.
Waxa kale oo ay leedahay tilmaame leyli ah oo casri ah oo la mid ah xeedhooyinkii hore ee 'MacBook' si aad u ogaato xaaladdooda xukun.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato xariggan cusub, waad booqan kartaa isku xirka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Volta XL, ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu soo celin karo MagSafe-ka loo yaqaan 'MacBook Pro'
"Adiga Ayaa Kafiican", Xayeysiiska cusub ee Apple ee lagu xayeysiinayo Apple Watch Series 4 cusub
Taxanaha cusub ee Apple Watch Series 4 ma u qalmaa iibsasho?